11/24/14 ~ MM Daily Star
ကေအိုင်အေကို အပြတ်တိုက်လို့ ရသလား.... ??
တပ်မတော်သုံးတဲ့ အမြောက်ဆိုတာ... ဘယ်လိုမျိုးလဲ.......
တပ်မတော်စခန်းကို .. ကေအိုင်အေ အင်အား ၆၀ လောက်က … ၆...
KIA မှ လူ ၂၃ ဦး သေဆုံးမှုနှင့်ပက်သတ်ပြီး ဗိုလ်ချု...
KIA လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူတို့၏ ယုတ်မာမှုများ
အမျိုးသား (၁၄၀) ဦးနဲ့ အတူအိပ်စက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဘွားအိ...
စစ်တပ် ထဲ ကို အခွင့်အရေး ရလို့ ၀င်တာတဲ့လား.
23:00 သတင်း, အင်တာဗျူးများ No comments
21:00 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
ကေအိုင်အေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေ တင်းမာလာချိန်မှာ …
အများဆုံး လာမေးကြတဲ့မေးခွန်းကတော့ …
ကေအိုင်အေကို အမြစ်ဖြတ်တိုက်လို့ရနိူင်သလား ?
ဘယ်လို နည်းလမ်းနဲ့တိုက်မလဲ ?
ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ….
ကေအိုင်အေကို အပြတ်တိုက်လို့ ရသလားဆိုတော့ ….
ရပါတယ် လို့ ပဲ ဖြေရမှာပါ ….
အမြစ်ဖြတ်ဖို့ ကတော့ …
တစ်နှစ်ကနေ သုံးနှစ်လောက်အထိ …
အချိန်ပေးရနိူင်ဖွယ် ရှိပါတယ် …
ဒါဆို ဘယ်လိုတိုက်မလဲ ????
ဟုတ်ကဲ့…
အဓိက ကျတဲ့အချက်ကြီး သုံးချက်ရှိပါတယ် …
ပထမ အချက် က …..
လူမျိုးရေး နဲ့ဘာသာရေးကို အခြေခံတဲ့…
လက်နက်ကိုင် အုပ်စု ဖြစ်ပါတယ် ….
ဒါကြောင့် ကေအိုင်အေကို တိုက်ချိန်မှာ ….
အရေးအကြီးဆုံး အချက် ….
အားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖွင့်ပြထားရမှာကတော့ …
ကျွန်တော်တို့ သည် ….
ကချင်လူမျိုးကို တိုက်ခြင်းမဟုတ် …
ခရစ်ယာန် ဘာသာကို တိုက်ခြင်းမဟုတ် ….
ကေအိုင်အေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကို …
တိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်တယ် …
ဒါကို ကမ္ဘာက သိအောင် ဖွင့်ပြထားရပါမယ် …
ဖွင့်ပြထားရုံနဲ့ ပြီးလားဆိုတော့ …
သက်သေလဲ ပြရပါမယ် ….
ဥပမာ … တပ်တွေက ရှေ့ က နယ်မြေရှင်းလင်းသွား …
အနောက်က လိုက်လာမယ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အဖွဲ့ တွေက …
ဒေသတွင်းမှာ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းတွေ …
ရာနဲ့ ချီပြီး အသစ်ဆောက်ပေးတာ …
ခေတ်ပညာတတ် အစွန်းမရောက်တဲ့သင်းအုပ်ဆရာတွေကို …
ခရစ်ယာန် အသင်းအဖွဲ့ တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စေလွှတ်ပေးတာ …
ကေအိုင်အေထဲ မပါတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကို …
စားနပ်ရိက္ခာ အထောက်အပံ့ တွေပေးတာ …
စာသင်ကျောင်းတွေ ဆောက်ပေးတာ ….
ဆေးပေးခန်းတွေ ဆောက်ပေးတာ …
ဆရာဝန်တွေ ခန့် ထားပေးတာ …
မြို့ ကြီးတွေကို လေ့လာရေး ခရီးစီစဉ်ပေးတာ …
ကမ္ဘာကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်နေရပါမယ် …
တရုတ်နိူင်ငံ ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပါတယ် …
လက်ရှိ ကေအိုင်အေ ရဲ့အထောက်အပံ့ရင်းမြစ်ဟာ …
တရုတ်နိူင်ငံ ဖြစ်ပါတယ် ….
ကေအိုင်အေ ရဲ့လက်နက်စက်ရုံ ….
စစ်ပစ္စည်း ကုန်ကြမ်းတွေ အားလုံးဟာ …
တရုတ်နိူင်ငံထုတ် ပစ္စည်းများဖြစ်သလို …
ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်များအားလုံးရဲ့နေအိမ်တွေဟာလဲ …
တရုတ်နိူင်ငံထဲမှာပဲ တည်ရှိပါတယ် …
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသား …
ပထမဆုံးပေးရမယ့် မက်ဆေ့ဟာ …
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ …
ပြည်တွင်းစစ် မချုပ်ငြိမ်းသရွေ့…
သူ ရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ….
စီးပွားရေး အဆောက်အအုံတွေရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ …
စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရှိတယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့…
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကို အထောက်အပံ့ ပေးနေသရွေ့…
နောင် ကျွန်တော်တို့ နဲ့ရေရှည် လက်တွဲလုပ်ဖို့…
လုံးဝ အဆင်မပြေနိူင်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ ….
ဥပမာ - ကူမင်း-ကျောက်ဖြူ ပိုက်လိုင်းဟာ …
တရုတ်ရဲ့အရေးကြီး အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ပါတယ် …
နယ်မြေမလုံခြုံလို့…
ဓာတ်ငွေ့ ပေးပို့ တာကို ခဏရပ်ရင် ရပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့…
ကျွန်တော်တို့ ဘာလိုချင်တယ် ဆိုတာ …
သူတို့ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ပါတယ် ….
တစ်နာရီလောက် ကြာတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲ ရဲ့ကျည်သုံးစာရင်းဟာ ….
ထောင်နဲ့ချီပြီး ရှိပါတယ် ….
တရုတ် ရဲ့ အထောက်အပံ့ မရှိဘဲ …
ကေအိုင်အေ ဟာ …
ရေရှည် စစ်တိုက်လို့လုံးဝ မရနိူင်ပါ …
တတိယ အချက်ကတော့ …
နိူင်ငံရေး နည်းအရ အနှောက်အယှက်ပေးလာမယ့် …
အစိုးရ ဆန့် ကျင်ရေး အင်အားစုတွေ ဖြစ်ပါတယ် …
ဒီအဖွဲ့ တွေကို တုန့် ပြန်ဖို့ အတွက် ….
ကေအိုင်အေ ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကို ခံနေရတဲ့…
တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေကို ….
သူတို့ ရဲ့ အခြေအနေမှန်တွေကို ဖော်ပြလို့ ရအောင် ..
ကေအိုင်အေ ရဲ့အတင်းအဓမ္မ လူသစ် စုဆောင်းတာတွေ …
မီးရထား ၊ ကား စတာတွေကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်တာတွေ ….
ရှမ်းနီ ရွာတွေ ရ၀မ်ရွာတွေကို …
အနိူင်ကျင့် နှိပ်စက်ခဲ့တာတွေ ….
ဒါတွေကို ပြည်သူတွေ သိအောင် …
ကမ္ဘာက သိအောင် ဖော်ထုတ်ရပါမယ် ….
တန်ပြန် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ် …
ဒီ အချက်သုံးချက်အတွက် …
လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ….
ကျွန်တော်တို့ ကေအိုင်အေကို …
စပြီး စစ်တိုက်လို့ ရပါပြီ ….
စစ်တိုက်တဲ့ အခါ …
အောက်ပါ စီမံချက်အတိုင်း …
အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်သွားလို့ ရပါတယ် ….
၁။ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်များမှ …..
ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ တပ်မတော်စခန်းများ နှင့် …
မြို့ရွာများ အားလုံး၏ ……
လုံခြုံရေးကို စတင်တာဝန်ယူကာ ……
တပ်မတော်၏ ခြေမြန်တပ်မ နှစ်ခု မှ …
လှုပ်ရှား စစ်ကြောင်း အများအပြားဖြင့်…..
ဒေသတွင်း ကေအိုင်တပ်ဖွဲ့ များ၏ လှုပ်ရှားမှုများအား …..
ထိတွေ့ မှုများ ရယူ၍ စတင်ကန့် သတ် ထိန်းချုပ် သွားပါမည်…..။
၂။ သီးခြားခြေမြန်တပ်မ နှစ်ခုဖြင့် ……
နည်းဗျူဟာ ထောက်ပံ့ ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ၏ …..
ထောက်ပံ့ ရေးနှင့် ပို့ ဆောင်ရေးတပ်ရင်းများမှ …..
အချက်အခြာ နေရာများတွင် ….
စုပုံရိက္ခာ၊ ဆေးဝါး နှင့် …
၃။ မြေပြင်ပစ် အမြောက်တပ်မ တစ်မ အား .....
ဒေသတွင်း ၌ ….
အမြောက်တပ်ဖွဲ့ များ ဖြန့် ကျက်နေရာချထားမှုကို ပြုလုပ်မည် …
အရေးကြီး ပစ်မှတ်များအားလုံး …
ကြိုတင် ပစ်မှတ် မှတ်ပုံတင်ထားရှိမည်….။
၄။ မြစ်ကြီးနား တွင် .....
သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တစ်အုပ်…..
တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တစ်အုပ် ……
ဗုံးကြဲတိုက်လေယာဉ် အုပ်တစ်အုပ် နှင့် …
အစောင့်လိုက် တိုက်လေယာဉ် တစ်အုပ် တို့ အား စုဖွဲ့ ထားရှိမည်….။
၅။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ အရေးကြီးမြို့ များအားလုံးကို .....
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားရှိပြီး …..
စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ များမှ ....
စစ်သတင်းများ မပေါက်ကြားစေရန်နှင့် ….
ရန်သူမှ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းများ မဆောင်ရွက်နိူင်စေရန် ….
မြို့ တွင်းရှိ ရန်သူ့ သတင်းပေးများအား …..
နယ်မြေခံ ပြည်သူ့ စစ်များ …
ရိက္ခာ ဆန် ၊ ဆား အများအပြား ၀ယ်ယူမှုများ....
ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးနှင့် ဆက်စပ်သော ....
ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခြင်းများ အားလုံးကို …
၆။ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ….
လိုင်ဇာရှိ အရပ်သားများအားလုံး …
မိမိဖက်သို့ လာရောက် ခိုလှုံလိုသော အရပ်သားများအား …..
စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ် ၊ တပ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ များ …..
ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း ၍ …..
ရန်သူ သူလျိုတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ မပါဝင်လာရေး စိစစ်ကာ …..
၇။ စစ်မြေပြင် ဆေးတပ်ရင်းများဖြင့် ….
အချက်အခြာ နေရာများတွင် …
ရှေ့ တန်းစစ်မြေပြင် ဆေးရုံများ တည်ဆောက်ကာ…..
လိုအပ်သော ကုသမှုများပေးနိူင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားမည်……။
၈။ စစ်မြေပြင် ဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံမှု တပ်ရင်းတစ်ခုဖြင့် ….
ကြားဖြတ် ဖမ်းယူမှုများ ပြုလုပ်ရေး ....
သတင်းမှားများ လွှင့်ထုတ်ရေး ….
မိမိ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ မပေါက်ကြားစေရေး အတွက် ....
အသံဖျက်စနစ်များ ဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်သွားမည် ….။
၉။ ပြည်သူ့ စစ်နှင့် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ …..
ပြည်တွင်း သတင်းထောက်များအား ….
အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုက်ပွဲသတင်းများ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း …
တိုက်ခိုက်ရေး စစ်ကြောင်းများနှင့် လိုက်ပါကာ ….
စစ်သတင်း ရယူလိုသော သတင်းထောက်များအား …..
အဆင်ပြေချောမွေ့ စေရန် ပေါင်းစပ်ညှိနိူင်းပေးခြင်း နှင့် …..
ရန်သူ ၏ ၀ါဒဖြန့် ချိမှုများအား …..
သတင်းမှန်များ ထုတ်ပြန်၍ ...
ချေဖျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားနိူင်ရန် …..
ရှေ့ တန်း ပြန်ကြားရေး စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိကာ …..
၁၀။ နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ညွှန်ကြားရေးမှုးရုံးမှ ……
ရှေ့ တန်း ဌာနချုပ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ် ၍ ….
ကချင်ပြည်နယ် ရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်များအားလုံး အား ….
အင်အားတိုးချဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်….
ထို့ အပြင် ကေအိုင်အေ ၏ ဖိနှိပ်အနိူင်ကျင့်မှုကို ခံနေရသည့် ….
လီစူး …မရူ …ရ၀မ် စသည့် ကချင်မျိုးနွယ်စုငယ်များ နှင့် ……
ရှမ်းနီ များအား လက်နက်တပ်ဆင်ပေးကာ.....
မိမိရွာအလိုက် ပြည်သူ့ စစ်အဖွဲ့ များဖွဲ့ စည်း ၍…..
ရန်သူ့ သတင်းများ ရရှိရေး.....
မိမိဒေသတွင်း ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့ များ ၀င်ရောက်မလာစေရေး ….
ဒေသ အလိုက် တားဆီးကာကွယ်စေမည်……။
၁၁။ ထပ်မံ ရောက်ရှိလာသော တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မ နှစ်မဖြင့် .....
လိုက်ဇာ နှင့် လိုင်စင် စစ်ဋ္ဌာနချုပ်သို့ ချီတက် သိမ်းပိုက်မည်….
ကေအိုင်အေ လက်နက်စက်ရုံများ …
ရိက္ခာ နှင့် စစ်ဝတ်အရင်းအမြစ်များအား ….
သိမ်းပိုက် ဖျက်ဆီးမည် …
ချီတက်ရာ လမ်းကြောင်းရှိ ရန်သူ့ ခံစစ်ကုန်းများအား ....
တာဝေးပစ် အမြောက်များဖြင့် လည်းကောင်း …..
ဗုံးကြဲ တိုက်လေယာဉ်များဖြင့် လည်းကောင်း ပစ်ခတ်ချေမှုန်းမည်….။
၁၂။ လိုင်ဇာ နှင့် လိုင်စင် အားသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် …
အချက်အချာမြေများ အားလုံးတွင် …
နယ်စပ် ဖြတ်ကူးနိူင်သော …
အဓိက ၀င် ထွက်ပေါက် နေရာများအားလုံး ပိတ်ဆို့ မည်...
နယ်မြေတွင်း ရိက္ခာ ခဲယမ်းနှင့် ...
သတင်း ဖြတ်တောက်မှုများ ပြုလုပ်ကာ…..
လက်နက်မချပဲ ကြွင်းကျန်သည့်ရန်သူအစုငယ်များအား ….
စစ်ကြောင်းများဖြင့် အပြီးသတ် ပိတ်ဆို့ ချေမှုန်းမည်…..။
၁၃။ တောတွင်း နှင့် တောင်ပေါ်စစ်ဆင်ရေးအတွက် ….
အထူးလေ့ကျင့်ထားသော ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ ငယ်များဖြင့် ….
ရန်သူ့ နောက်သို့ခြေရာခံ ကောက်သင်းကောက် ...
၁၄။ ဖမ်းဆီးရမိသည့် စစ်သုံ့ ပန်းများအား …..
စရဖ တပ်များမှ လိုအပ်သည့် စစ်ကြောမှုများ ပြုလုပ် ၍….
သတင်းကွင်းဆက် ဖော်ထုတ်နိူင်ရေး ဆောင်ရွက်မည် ….။
၁၅။ သာမန် စစ်သုံ့ ပန်းများအား အလင်းဝင်ရောက်စေကာ …..
နယ်ခြားစောင့် တပ်များတွင်လည်းကောင်း …
ဒေသခံ ပြည်သူ့ စစ်များတွင် လည်းကောင်း နေရာချထားပေးပြီး …..
လိုအပ်သည့် ထောက်ပံ့ မှုများ ပြုလုပ်ပေးမည်….။
၁၆။ ဒေသတွင်း ရွာပုန်းများအား ဖယ်ရှားရှင်းလင်းကာ ……
ကားလမ်းများ ဖောက်လုပ်ပေးပြီး …..
စာသင်ကျောင်းများ ၊ ဆေးပေးခန်းများ ပါဝင်သော...
စုပေါင်း ရွာကြီးများ အဖြစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးမည်…
တပ်မတော်နှင့် နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ များ မှ …..
ထိုရွာများတွင် အခြေစိုက်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိမည်….
၁၇။ ရေရှည် စီမံချက်အနေဖြင့် …..
ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် ( မိုးညှင်း )….
ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် (ဗန်းမော်) …..
ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် ( ဖားကန့် )….
ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် ( ပူတာအို) တို့ အား …..
တစ်နှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ရမည် …
ထို စစ်ဋ္ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်များ ….
ကျေးရွာအလိုက် ပြည်သူ့ စစ်များနှင့်ပူးပေါင်း ၍…..
နယ်မြေစိုးမိုးရေး နှင့် ပြည်သူ့ စစ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကာ ….
ကေအိုင်အေ အမာခံ နှင့် အကြွင်းအကျန်များအား …
ဆက်လက်ဖော်ထုတ် ရှင်းလင်းသွားမည် …….
ထိုသို့စီမံဆောင်ရွက်လျှင် …
ကေအိုင်အေကို အရုပ်ရေးပြရမတတ် ဖြစ်သွားစေမည် … ။ ။
( မှတ်ချက် ။ ကေအိုင်အေ ပေ့ခ်ျတစ်ချို့ တွင် ...
ပျောက်ကြားစစ်နည်းဗျူဟာ အား ...
ဘယ်တော့မှ မရှုံးနိမ့်နိူင်သည့် ....
ပြိုင်ဘက်ကင်း စစ်နည်းဗျူဟာအဖြစ် မှတ်ထင်နေသည့် ...
ရည်စူး ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည် )
အမျိုးသား ၁၀၀,၀၀၀ ပြည့်အောင် စပ်ယှက်မည့် လိင်မာရသွန်ခရီးအတွက် ပိုလန်သူက ပြည်ပသို့ခရီးဆန့်လို
17:00 ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
တပ်မတော်သုံးတဲ့ အမြောက်ဆိုတာ... ဘယ်လိုမျိုးလဲ.... ?
16:00 တပ်မတော် သတင်း, ဗဟုသုတ No comments
တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီး နဲ့ပတ်သက်တဲ့…
တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီးမှာ သုံးမျိုးခွဲခြားနိူင်တယ် …
အမြောက် ၊ စိန်ပြောင်း နဲ့ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်တို့ ဖြစ်တယ် …
အမြောက်ဟာ ပထမဆုံး ပေါ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ် …
တရုတ်လူမျိုးတွေက ယမ်းမှုန့် စတင်တီထွင်နိူင်ခဲ့ပြီး …
ပထမဆုံး ယမ်းမှုန့် သုံး အမြောက်ကို ….
တရုတ်ပြည် စောင်မင်းဆက် လက်ထက် …
တရုတ်စစ်သူကြီး ဟန်ရှီဆောင်က …
၂၈.၁.၁၁၃၂ ရက်နေ့စစ်မြေပြင်မှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့တယ် ….
အမြောက်လက်နက်တွေ အားလုံးဟာ …
ပစ်ထောင့် ၄၅ဒီဂရီထက် ပိုထောင်ပြီးပစ်လို့ မရခဲ့ဘူး ….
ဒုတိယ ပေါ်လာတာကတော့ …
စိန်ပြောင်း (မော်တာ) ဖြစ်တယ် …..
ပထမဆုံး စိန်ပြောင်းလက်နက်တွေကို …
ဘိုင်ဇင်တိုင်း အင်ပါယာနဲ့...
အော်တိုမန်အင်ပါယာတို့ဖြစ်ကြတဲ့စစ်ပွဲ …
၁၄၅၃ ခု မေလမှာ စတင် အသုံးပြုခဲ့တယ် ….
ပစ်ထောင့် ၄၅ဒီဂရီ နဲ့...
၈၇ဒီဂရီ ကြားလောက်မှာပဲ ပစ်လို့ ရတယ် …
၄၅ ဒီဂရီအောက် ချပြီး ပစ်လို့ မရဘူး ….
ဒီ အမြောက် နဲ့စိန်ပြောင်း တို့ ရဲ့…
ပစ်ခတ်မှု အားနည်းချက်တွေကို ပြုပြင်ရင်း ….
ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက် ဆိုတာ စပေါ်ပေါက်လာတယ် ….
ဟောင်ဝဇ်ဇာဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဟာ …
ချက်ဘာသာစကား ဟောင့်ဝ် ဆိုတဲ့...
စကားက ဆင်းသက်လာတယ် …
အခု ခေတ်သစ် ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်တွေဟာ …
ချက်တွေ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဟော့ဝ်နေ့ စ် အမြောက်တွေက …
အဆင့်ဆင့် ဆင်းသက်လာတယ် ….
၁၇ရာစု နှောင်းပိုင်းမှာ …
ဒီနေ့ အသုံးပြုနေကြတဲ့…
ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်ကို …
ဆွီဒင်နိူင်ငံက စတင် တီထွင်ခဲ့တယ် …
ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်တွေဟာ …
ပစ်ထောင့် ၈၇ ဒီဂရီ နဲ့၁၈၀ ဒီဂရီကြား ပစ်ခတ်လို့ ရတယ် …
အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပေးရရင် …
အမြောက် နဲ့မော်တာ ရောထားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ် …
ဒီနေ့ ခေတ်မှာ အမြောက်အားလုံးဟာ ….
ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်တွေပဲ ဖြစ်နေပြီ …
ရိုးရိုး အမြောက်ကို …
ဘယ်သူမှ မထုတ်လုပ်ကြ အသုံးမပြုကြတော့ဘူး …..
တာဝေးပစ် လက်နက်ကြီးတွေနဲ့…
ရိုးရိုး လက်နက်ဘာကွာလဲ ဆိုရင် …
အဓိက ကွာခြားချက် ၂ခု ရှိတယ် …
တာဝေးပစ် လက်နက်တွေဟာ ပစ်မှတ်ကို မမြင်ရဘူး …
အဝေးကြီးက တွက်ချက်ပြီး လှမ်းပစ်ရတာ ဖြစ်တယ် …
Pin Point အရမ်းကြီး တိတိကျကျ ပစ်လို့ မရဘူး …
ပစ်မှတ်နဲ့ကိုက်၅၀ ကိုက်၁၀၀ အတွင်းကျရောက်ရင်ကို …
ပစ်မှတ်ကို မှန်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ် …
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ...
ပစ်ခတ်တဲ့ အချက်အလက် မြေပုံညွှန်းတူရင်တောင် ...
ပထမကျည် နဲ့ ဒုတိယကျည် ကျတဲ့ နေရာ...
ဘယ်တော့မှ မတူနိူင်ဘူး ...
လေတိုက်နူန်း ၊ စိုထိုင်းဆ ၊မြူခိုး စတဲ့ အချက်တွေက...
စက္ကန့် နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေလို့ ဖြစ်တယ် ...
သူ့ ရဲ့ကျည် ထိရောက်မှုအကွာအဝေးကလဲ …
ကိုက် ၁၀၀ လောက်အတွင်း လူသေစေနိူင်တယ် …
အမြောက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာ အကြမ်းဖျင်း အားဖြင့် …
အကဲကြည့် အဖွဲ့ ရယ် …
ပစ်မိန့် ပေးအဖွဲ့ ရယ် …
Gun Crew ရယ် ဆိုပြီး ခွဲခြားနိူင်တယ် ….
ပစ်မှတ်တစ်ခုကို မချေမှုန်းမီ …
ပစ်မှတ် အဆင့်ကို သတ်မှတ်တယ် ….
တပ်ခွဲအဆင့် ပစ်မှတ်ဆို ...
အမြောက် ၈လက်နဲ့ ပစ်တယ် …
တပ်ရင်းအဆင့် ပစ်မှတ်ဆို ...
အမြောက် ၃၂လက်နဲ့ပစ်တယ် ….
တပ်မ အဆင့် ပစ်မှတ်ဆို ...
အမြောက် အလက် ၃၀၀ လောက်နဲ့ပစ်တယ် ..
ပစ်ခတ်မှုတစ်ခု စတင်ပြီ ဆိုတာနဲ့…
ပထမဆုံး ပစ်မိန့် ပေးအဖွဲ့ ဟာ ….
မိမိ Gun ရဲ့တည်နေရာ …
ပစ်မှတ်ရဲ့ တည်နေရာ စတာတွေကို တွက်ချက်ပြီး …
Gun Crew တွေကို …
ပစ်မှတ်ကို စတင် ရှာဖွေ ပစ်ခတ်စေတယ် …
ဒါကို Search Fire ပစ်ရှာ လုပ်တယ် လို့ ခေါ်တယ် …
Search Fire ကို သာမန်အားဖြင့် …
ကျည်ကျကို အကဲကြည့်က မြင်ရလွယ်အောင် ….
မီးခိုးဗုံးလိုမျိုးနဲ့ပစ်တယ် …
တပ်ခွဲ အဆင့်ပစ်မှတ်လောက်မှာ …
အမြောက်တစ်လက်လောက်ကပဲ ပစ်ရှာလုပ်ပေမယ့်…
တပ်ရင်းအဆင့် ပစ်မှတ်လောက်ဆို …
တပ်ခွဲ အမြောက် ၈လက်လောက်ကနေ ပစ်ရှာလုပ်တတ်တယ် …
တပ်မအဆင့် ပစ်မှတ်ဆို …
တပ်ရင်းအမြောက် ၃၂လက်လောက်က ပစ်ရှာလုပ်တယ် …
ပထမဆုံး ပစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အမြောက်ဆန်ဟာ …
ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်ဖို့အတော်ခဲယင်းတယ် …
အမြောက်ကျည်ကျတဲ့ နေရာကို ကြည့်ပြီး …
ရှေ့ တန်း က ပစ်မှတ်နားမှာရှိနေတဲ့…
ပစ်မှတ်ကို လှမ်းမြင်နေရတဲ့အကဲကြည့်အဖွဲ့ က …
တာဝေး နဲ့ဗယ်ညာကို ပြင်ဆင်ပေးပြီး …
ကျည်ထိချက်ကို ပစ်မှတ်နဲ့နီးလာအောင် …
တဖြည်းဖြည်း ကွင်းဖမ်းယူတယ် ….
တစ်ချို့ စစ်မြေပြင်တွေမှာ …
အကဲကြည့်အဖွဲ့ ဟာ …
ရှေ့ တန်းက တိုက်နေတဲ့ခြေလျင်တပ်တွေကပဲ …
ပုံမှန်အားဖြင့် Search Fire ကို ….
၃ချက် ကနေ ၁၀ ချက်လောက်အတွင်း …
၁၅ မိနစ်ကနေ တစ်နာရီလောက် အထိ ကြာတတ်တယ် …
တစ်ခါတစ်လေ ပထမဆုံးပစ်လိုက်တဲ့ပစ်ရှာကျည်ဟာ …
ဘယ်နား သွားကျမှန်း မသိဘဲ ပျောက်သွားလို့…
အစအဆုံး ပြန်တွက်ချက်ပြီး ပစ်ရတာမျိုးလဲ …
ပစ်မှတ်တစ်ခုကို ကိုက်၅၀ နဲ့၁၀၀ အတွင်း …
ကွင်းဖမ်းမိသွားပြီဆိုတာနဲ့…
Search Fire ပစ်ခတ်ခြင်း ပြီးဆုံးပြီး …
ရှိသမျှ အမြောက်အားလုံးနဲ့….
ထိရောက် ချေမှုန်း ပစ်ခတ်ခြင်း စတင်တယ် …
ထိရောက် ချေမှုန်း ပစ်ခတ်ခြင်းမှာ ….
One Round ပစ်ခတ်ရင် …
ကျည် သုံးတောင့်ကနေ ငါးတောင့်သုံးတယ် …
တပ်ခွဲ ပစ်မှတ် One Round ဆိုရင် …
အမြောက် ၈လက်က ….
အမြောက်ကျည် ၂၄ တောင့်ကနေ ၄၀ အထိ ပစ်တယ် …
တပ်ရင်း ပစ်မှတ် One Round ဆိုရင် …
အမြောက် ၃၂ လက်က …
အမြောက်ကျည် ၉၆တောင့် ကနေ အတောင့် ၁၆၀ထိ ပစ်တယ် ..
ပစ်မှတ် မပျက်စီးမချင်း …
One Round , Two Round , Three Round စသဖြင့် …
ပစ်ခတ် ချေမှုန်းတယ် ….
အမြောက် ပစ်ခတ်ခြင်းသဘောတရားကို …
ကောင်းကောင်း နားလည်လောက်ပြီ ….
၁၀၅ မမ ဟောင်ဝဇ်ဇာအမြောက်ဟာ …
မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ အပေါ့စားအမြောက်ဖြစ်တယ် …
စစ်သုံး ထရပ်ကား တစ်စီးပေါ်တင်ပြီး …
အလွယ်တကူ ရွှေ့ ပြောင်းနိူင်တယ် …
တပ်မတော်မှာ အလတ်စား အမြောက်တွေက …
အများကြီး ရှိနေပြီ ….
၁၅၅ မမ ၊၁၃၀ မမ ၊ ၁၂၂ မမ …
ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက်တပ်တွေ …
အများကြီး ဖွဲ့ စည်းထား ပြီးပြီ …
ကေအိုင်အေ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းကို …
တိုက်ရိုက်ထိသွားတဲ့ကျည်ဟာ …
နမ့်ဆန်းယန် စခန်း ၂မိုင်လောက် အကွာကနေ …
လှမ်းပစ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ် …
ပစ်မှတ်ကို တွက်ချက် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်လို့…
တွက်နေစရာ မလိုပဲ ချက်ချင်းပစ်လိုက်နိူင်ပေမယ့်…
ချေမှုန်း ပစ်ခတ်တာလား ….
သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာ…
ဖြစ်နိူင်မလား ဆိုတာတော့ …
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်ဖို့ ပဲ ဖြစ်တယ် …
၁၀၅ မမ ဟောင်ဝဇ်ဇာ အမြောက် တပ်ခွဲ တစ်ခွဲ …
တကယ်တန်း ချေမှုန်း ပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင် …
အဆောက်အဦးတွေ အသာထားအုန်း …
တောင်ကုန်း တစ်ခုလုံး သစ်ပင်တစ်ခုမှ မကျန်ဘဲ …
ထယ်ထိုးထားသလို ဖြစ်သွားမယ်လို့သိထားတယ် … ။ ။
တပ်မတော်စခန်းကို .. ကေအိုင်အေ အင်အား ၆၀ လောက်က … ၆၀မမ မော်တာတွေနဲ့ပစ်ပြီး ၀င်တိုက်
15:00 တိုက်ပွဲ သတင်း No comments
ဒီကနေ့၂၃.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့....
မနက် ၄နာရီ ၈မိနစ် ချိန်လောက်မှာ …
ဒေါ့ဖုံးယန် နဲ့ လွယ်မောက်ယန်ကြားက …
ဆီတုံ တပ်မတော်စခန်း ကို ..
ကေအိုင်အေ အင်အား ၆၀ လောက်က …
၆၀မမ မော်တာတွေနဲ့ပစ်ပြီး ၀င်တိုက်ပါတယ် …
စခန်းက ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့ အပြင် …
တပ်မတော် လက်နက်ကြီးများက …
ကေအိုင်အေ ရင်း ၂၄ နဲ့...
တပ်မဟာ ၅ တပ်စွဲထားတဲ့ နေရာများကို …
သတိပေး ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် …
မနေ့ ကလဲ ညနေ ၅ နာရီ ၅၀ ချိန်မှာ…
လွယ်ဂျယ်အနီးက လွယ်ရင်းမော် တပ်စခန်းကို …
ကေအိုင်အေ အင်အား စိစစ်ဆဲ အဖွဲ့ တစ်ခုက …
၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ပါတယ် …
တပ်မတော် ဘက်က …
တန်ပြန် ပစ်ခတ်ချိန်မှာတော့ ….
ဒီ ပစ်ခတ်မှုတွေအတွက် …
ကေအိုင်အေ လူကြီးပိုင်းကို …
သတိပေးထားပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ် ….
စစ်ရေးအခြေအနေ ပြန်လည်တင်းမာလာတဲ့...
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောရင်း …
ဒီ အကြောင်းကို ပြောဖြစ်ကြတော့ ….
ခင်ဗျား ဘယ်လိုထင်လဲ ဆိုပြီး ...
ကျွန်တော့် ထင်မြင်ချက်ကို လှမ်းမေးပါတယ် ...
အတွေးနယ်ချဲ့ ပြီး စိတ်ရှုပ်နေဟန်ရှိတဲ့...
ကျွန်တော့်မျက်နှာထားကို လှမ်းမြင်ချိန်မှာတော့ ...
သူ ဘာမှ ထပ်မမေးတော့ပါဘူး ....
ကျွန်တော် တွေးနေမိတာ က ...
ဒီတိုက်ပွဲတွေ အကြောင်း ….
ကေအိုင်အေ ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းကို ထိမှန်သွားတဲ့…
၁၀၅ မမ အမြောက်ကျည်ဆံ မဟုတ်ပါဘူး ...
သူ ထိမှန်သွားတဲ့ပစ်မှတ်အကြောင်း ...
ပိုပြီး တိတိကျကျ ပြောရရင် ...
ကေအိုင်အေ ဗိုလ်သင်တန်းအကြောင်း ....
တက်နေတဲ့ ဗိုလ်လောင်းတွေ အကြောင်း ...
ပေးနေတဲ့ သင်တန်းတွေ အကြောင်း ....
အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်း ...
ဒါတွေကို တွေးနေမိတာပါ ….
လက်နက်ကြီး ထိမှန်သွားတဲ့ဗိုလ်လောင်းတွေဟာ ...
ကေအိုင်အေ က တစ်ယောက်မှ မပါဘဲ ...
ရခိုင်ရယ် တအောင်းရယ် ချင်း ၊ အေဘီ…
စတဲ့ အဖွဲ့ တွေက ဖြစ်နေပါတယ် …
ဒါနဲ့…
အဲဒါ ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲလို့ စုံစမ်းကြည့်မိတော့ …
ကေအိုင်အေ ဗိုလ်သင်တန်း မဟုတ်ဘဲ ….
ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် ဗိုလ်သင်တန်း ဖြစ်နေပါတယ် …
အတော်တော့ ခက်နေပါပြီ …
စစ်တပ်က အပြတ်ပြောထားတာ ....
၁။ လက်ရှိတပ်မတော်သည် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖြစ်တယ် …
နောက်ထပ် မည်သည့် တပ်မတော်ကိုမှ လက်မခံနိူင် ။
၂။ အလှည့်ကျ ကာချုပ်စနစ် လက်မခံ ။
ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလဲသွားစရာ မရှိတဲ့…
တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားတွေ ဖြစ်ပါတယ် …
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ သဘောထား မဟုတ်ပါ ….
တပ်မတော် ရဲ့သဘောထား ဖြစ်ပါတယ် ….
ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် …
ပြည်သူ အများစုကလဲ …
ဒီ အချက် နှစ်ချက်ကို လက်ခံနိူင်ကြမှာပါ …
အဲဒီလောက် အပြတ်ပြောထားကိုမှ …
ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဗိုလ်သင်တန်းဆိုပြီး …
ကေအိုင်အေက သင်တန်းခေါ်ပေးနေတဲ့ကိစ္စဟာ …
ကေအိုင်အေ ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ် …
ကောင်းကောင်း ခန့် မှန်းလို့ ရလာပါတယ် …
ကျွန်တော် အကြံပြုချင်တာ ၃ ချက် ရှိပါတယ် …
၁။ အစိုးရ အဖွဲ့ ဟာ …
ကေအန်ယူ ၊ ၀ ၊ မိုင်းလား ၊ RCSS စတဲ့ အဖွဲ့ တွေနဲ့…
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးသင့်ပါပြီ ….
မထိုးချင်တဲ့ သူတွေ ချန်ထားခဲ့ပါ…
ပြီးရင် နိူင်ငံရေး ဆက်ဆွေးနွေးကြပါတော့ ….
၂။ လွှတ်တော်အနေနဲ့…
အခြေခံ ဥပဒေက ဇယား ၁၂၃၄၅ တွေ ….
အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ဖို့ လိုနေပါတယ် …
ပြည်ထောင်စုက ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့….
သယံဇာတ နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေကို ..
ပြည်နယ်တွေကို ပေးနိူင်သလောက် ခွဲဝေပေးလိုက်ပါ ….
ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်တွေကို …
သမ္မတက မခန့် ပါနဲ တော့…
သူတို့ ဖာသာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကရွေးကောက်ပြီး …
သူတို့ ပြည်နယ် အကျိုးကို ....
လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါစေ ….
၃။ အစိုးရ အဖွဲ့ နဲ့လွှတ်တော်က ….
၂၀၁၅ မတိုင်မီ ဒီကိစ္စတွေ အပြတ်ဖြတ်ပေးပါ …
ပြီးရင် တက်လာတဲ့အစိုးရအသစ်အနေနဲ့…
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို လက်မခံတဲ့အုပ်စုတွေကို ….
အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းဖို့…
တပ်မတော်ကို အမိန့် ပေးသင့်ပါပြီ ……
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက …
ပြည်တွင်းစစ်ဟာ အချိန်သိပ်ကြာနေပါပြီ ....
တစ်ချို့ ကိစ္စတွေဟာ ….
အပ်နဲ့ ထွင်းရမယ့် အချိန်မှာ မထွင်းမိတဲ့အတွက် ….
အမြောက်နဲ့ပစ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကို ရောက်သွားခဲ့ရင် …
ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိပါဘူး ….
ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စတွေကို …
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ် ။ ။
( Photo - ခလရ ၂၁ မှ လူနာပို့အဖွဲ့ အား ...
ကေအိုင်အေ မှ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရစဉ် ...
အရှင်လတ်လတ် မီးလောင်သေဆုံးသွားခဲ့သော ...
လူနာစစ်သည်များအား သယ်ဆောင်လာသော ယာဉ် )
KIA မှ လူ ၂၃ ဦး သေဆုံးမှုနှင့်ပက်သတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအမြင်
14:00 သတင်း, အင်တာဗျူးများ No comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ အနာဂတ်နိုင်ငံရေး
13:00 တပ်မတော် သတင်း, အင်တာဗျူးများ No comments
ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်အပါအ၀င် တပ်မတော်နဲ့ လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေ၊ တပ်မတော်နဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ အနာဂတ် နိုင်ငံရေး စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းတို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း တတိယနဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
12:00 သူ့အတွေး သူ့အမြင်, သောက်တစ်လွဲ လုပ်ရပ်များ No comments
KIAလက်နတ်ကိုင်သောင်းကျန်းသူတို့ စတင်သတင်းထုတ်လွှင့်တုန်းစဉ်က ………..
ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်းမှ ဗိုလ်လောင်းတွေ သေတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်မှ KIA တစ်ယောက်မှ မပါဘူးလို့ ထပ်ပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် KIA လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူတွေရဲ့ သဘောထားကို သိမြင်လောက်သင့်ပါပြီ။
၄င်းအပြင်တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သည့် မပည(မြေပုံညွှန်း) သည် KIA သောင်းကျန်းသူတို့၏ သင်တန်းနေရာမဟုတ်ပေ။ ၄င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ တမင်များ ထိုးကျွေးလိုက်လေသလားဟု တွေးစရာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ …….
၂၁ ရက်နေ့တွင် KIA လက်နတ်ကိုင်သောင်းကျန်းသူတို့၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းများ အစည်းအဝေးပွဲ၌ တပ်မတော်အား သတင်းအတိအကျပေးသည်ဟု သုံးသပ်ချက်ကို တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဟု KIA အတွင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့လေသည်……
ဤသည်မှာပင် တပ်မတော်အား ဗီလိန်နေရာသို့ ဆွဲသွင်းခဲ့ပြီး၊ ကျန်လက်နက်ကိုင်တို့၏ တပ်သားများကို ထွေးကျွေးခဲ့ခြင်းမှာ ပေါ်လွင်လှပါသည်။
ထိုသင်တန်းတွင် ရခိုင်တပ်မတော် ၈ ဦး သေဆုံးသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး RSO မှ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မပါပဲ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ RSO မှ သင်တန်းသား ၅ ဦးပျောက်ဆုံးနေသည်။ ၄င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တပ်မတော်နှင့် ကျန်လက်နတ်ကိုင်တို့အကြား ပဋိပက္ခ ကြီးထွားစေရန် ရည်ရွယ်နေသည်။ ထို့ပြင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် KIA မှ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထိခိုက်မှုမရှိဟု ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသော်လည်း KIA လက်နတ်ကိုင်အဖွဲ့အ၀င်တို့၏ မိသားစုများမှာ ဆုတောင်းပွဲများပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုလည်း ထောက်ရှုရပေဦးမည်။
ဤသို့ဖြင့် KIA လက်နတ်ကိုင်သောင်းကျန်းသူတို့သည် သတင်းကို အမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်ပြီး တပ်မတော်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးစဉ်ကာလတွင် ကျန်လက်နတ်ကိုင်များပါ သောင်းကျန်းမှုများ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်နေသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည် …… ။
အမျိုးသား (၁၄၀) ဦးနဲ့ အတူအိပ်စက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အဘွားအို
11:00 ထူးဆန်းထွေလာ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
အိုင်ယာလန် နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် (၅၃) နှစ်အရွယ် အဘွားအို တစ်ဦးဟာ လက်ရှိ အချိန်အထိ အမျိုးသား (၁၄၀) ဦးနဲ့အတူ အိပ်စက် ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ဒီနာရဲ့ ထူးခြားမှု ကတော့ အတူ အိပ်စက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတွေ ရဲ့အကြောင်းကို မှတ်တမ်း ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ဒီနာဒို ဟာ အသက် (၁၉)နှစ် အရွယ်မှာ အပျိုစင်ဘ၀ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ ပြီးနောက် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ ပါတယ်။ ဒီနောက် အမျိုးသားတွေနဲ့ ဆက်တိုက် အိပ်စက် ခဲ့ပြီး မှတ်တမ်းပြု လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ဒီနာဒိုဟာ သူ့ရဲ့ အိပ်စက်တဲ့ အမျိုးသား တွေရဲ့အကြောင်းကို အသေးစိတ် မှတ်သားပြီး ဘယ်သူက ဘယ်လိုမျိုး အကျင့်စရိုက် ရှိတယ် ဆိုတာကို မှတ်တမ်းနဲ့ သိမ်းဆည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မှတ်တမ်းတင် ရာမှာ အတိုကောက် စာလုံး ကိုသာ အသုံးပြုလေ့ရှိ ပါတယ်။
ဆန်ဒီနာဒိုဟာ ကချေသည် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း (၃၀)ကျော်ကို သွားရောက်ဖူးကာ အမျိုးသားတွေနဲ့ အိပ်စက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဆန်ဒီနာဒိုရဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံး နေရာမှာရှိ တဲ့သူက အနှစ် (၂၀)ကျော် အိပ်စက်ခဲ့တဲ့ မက် ဖြစ်ပြီး အောက်ဆုံး နေရာမှာတော့ အင်္ဂလိပ် လူမျိုး တစ်ဦးဖြစ်ကာ ကတိပေးပြီး ဘယ်တော့မှ လုပ်လေ့ မရှိဘူးလို့ မှတ်တမ်းတင်ထား ပါတယ်။ ဆန်ဒီနာဒိုရဲ့ အပြုအမူကို အသက် (၂၈) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ သားဖြစ်သူက ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း မရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှ မပြောတော့ဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဆန်ဒီနာဒိုက ကျားသစ်တွေရဲ့ အစက် အပြောက် တွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲလို့ မရသလို မိမိ၏ အပြုအမူ ကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆန်ဒီနာဒို ဟာ သူ့ရဲ့အကြောင်းကို အသက် (၈၈) နှစ်အရွယ် မိခင်ကို ပြန်ပြောလေ့ ရှိပြီး မိခင်ဖြစ်သူက အလွန်ကံကောင်းတဲ့ သမီးလို့ မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။
10:00 ဘင်္ဂလီ များ No comments
ဗလီ ကို အမှန် တကယ် ဖျက်တာပါ
ဒီလိုဖျက်တာ ကို အစ္စလာမ် ကလည်း ကျေနပ်တယ်
မဘသ ကလည်း မှ ဝင် မပါဘူး
အစ္စလာမ် ဘာသာတစ်ဦး က မနေ့ ည ကပြောပြလိုသိရပါတယ်
ဒီ ဗလီ နှင့် ကျောခြင်းကပ်မှာ ဘုန်ကြီးကျောင်း
ရှိပြီး မြေပိုင်ဆိုင်မှူ အငြင်းပွါး တရား ရင်ဆိုင်
နေတာ နှစ်၂၀ ကျော်ပီလို့ဆိုပါတယ်
တရားရုံး အဆုံး အဖြတ်တော့ ကျနော်မသိပါ
ခရိုင်ထွေအုပ် အမိန့် နှင့် ဖျက်တာပါ
နေ့ ခင်းမှာ လူ ၁၀ ယောက်လောက်လာဖျက်
တာ အစ္စလာမ် ကလည်း ဘာမှ မပြောပါဘူး
ကျေကျေနပ်နပ် ပါ ပဲတဲ့ 
မဘသ ၉၆၉ ဆိုသူတွေ ကလည်း မပါ ပါဘူး
လူ ၁၀ဦး နှင့် ဖျက်တာ ဘယ်ပီး မလဲ ဆို လက်
ညပိုင်း မှာ ဒိုဇာ နှင့်ထိုး တစ်ပါတွေ နှင့်သယ်
ရှင်းလင်း လိုက်တာ မိုး လင်းတော့ မြေပြင်ညီ
ဖြစ်သွား တယ် လို့ဆိုပါတယ်
၄င်း အစ္စလာမ် မိတ်ဆွေ က ခဝတ ဥက္ကဌ တော်တယ်လို့တောင်
ကျနော် လည်း ဒါကို အစ္စလာမ် တွေ က ဘာလို့ 
ကျေနပ် လက်ခံတာလဲ လို့မေးမိပါတယ်
ဒီဗလီ က လူကြီးတွေ အစဉ် အဆက် မညီညွတ်
တော့ ဒီဗလီကြီးမှာ ဝတ်ပြူသူ ၄ ၅ ယောက်ထက် မပိုဘူး လို့ဆိုပါတယ်
ဝတ်ပြုသူ မရှိတဲ့ဗလီ ရှိနေတာထက်
မရှိ တာ ကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်
အစ္စလာမ် တွေ က ဖျက်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တောင်
ဒါ ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့်
မျတ စွာ လုပ်ကိုင်ရင် ပြသနာ အလျဉ်း မရှိဘူး
ဆိုတဲ့အဖြေ ကို ရမပါ
နေရာ တကာ ကိုယ် နိုင်မှ အသာစီး ရမှ ဆိုတဲ့
စိတ်တွေ ဘေးဖယ် လိုက်ရင်
ဒီမိုကရေစီ စစ်စစ် က မနက်ဖန် ဆိုရ မှာပါ လို့ 
From: Minimun Tiger